NMDC Virtual Student Forum Day(1) – NMDC
NMDC Virtual Student Forum Day(1)
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on NMDC Virtual Student Forum Day(1)
Key Note Speech 1 by Dr. Tun Thura Thet
“The New Normal: Transforming Businesses Digitally & The Rise of Intelligent Enterprises’
By Dr.Tun Thura Thet
NMDC Virtual Student Forum Day 1
"The New Normal: Transforming Businesses Digitally & The Rise of Intelligent Enterprises'By Dr.Tun Thura ThetKeynote Speech 1NMDC Virtual Student Forum Day 1#NMDC #NMDCSU #Virtual_Student_Forum #CareerAspirations #Covid19 #PostCovid #Workshop #KeynoteSpeech #PanelDiscussion
Posted by National Management Degree College Students' Union on Friday, June 26, 2020
Key Note Speech2by Ma Yee Mon Kyaw
“Career Readiness in the Digital World”
By Ma Yee Mon Kyaw
"Career Readiness in the Digital World"By Ma Yee Mon KyawKeynote Speech 2NMDC Virtual Student Forum Day 1#NMDC #NMDCSU #Virtual_Student_Forum #CareerAspirations #Covid19 #PostCovid #Workshop #KeynoteSpeech #PanelDiscussion
(Myanmar) ပညာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင် ဆွေးနွေးပွဲ
Internship Program The internship program offers work experience in one of the business entities under Capital Diamond Star Group (CDSG), [...]
What is Journalism? How do you understand about Journalism? Do you know about Journalism Major? If you want to beajournalist [...]
20.9.2020 မှာ NMDCer တို့အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Webinar ( How to Join YDSC Open Study Groups) မှာ တက်ရောက်မပါဝင်လိုက်ရသည့် သူများအတွက် Recording ပြုလုပ်ထားပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်း
20.9.2020 မှာ NMDCer [...]
သတင်းအသိ သတိရှိကြပါစို့ ဒေါက်တာဇင်မာကျော် (သတင်းအတတ်ပညာ) ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် အင်တာနက်နှင့် စမတ်ဖုန်းနည်းပညာများကြောင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူမှု ရေစီးကြောင်း ပြောင်းလာသည့်အတွက် မီဒီယာ ရယူမှုပုံစံလည်း ပြောင်းလဲလာကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှု မြင့်တက် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် သတင်းအချက် အလက်များစွာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်စီးဆင်းနေသည့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွင် [...]
(Myanmar) 2020 WACC TOP 10 Winner presentation_ National Management Degree College
(Myanmar) (၇၂)နှစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြို ကျောင်းတွင်းအားကစားပြိုင်ပွဲမှ ပုံရိပ်များ
NMDC VSF2.0 BBM Week Day (1)
Defining Your Passionate Career Panel Discussion By Dr. Thynn Thynn Myint, U Aung Chit Khin, U Mike Phone Myint, U Zin [...]
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲပညာဒီဂရီကောလိပ်မှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက် ” Quality Assurance Workshop NMDC Internal QA ” ပွဲကျင်းပခြင်း (၁-၈-၂၀၁၉)